Himalaya Dainik » दैनिक दुईटा ओखर खानुका १५ चमात्कारिक फाइदा
दैनिक दुईटा ओखर खानुका १५ चमात्कारिक फाइदा
ओखरको सेवनले मस्तिष्कको विकाससहित यसलाई स्वस्थ्य राख्न सघाउ पुर्याउँछ । ओखरमा पाइने प्रचुर मात्राको पोषक तत्वले छाला र कपालसमेत मुलायम एवम् चम्किलो बनाउँछ ।
ओखरमा भरपुर मात्रामा ओमेगा ३ फ्याटी एसिड हुन्छ । साथै यसमा भिटामिन ए, बि६, बि १२, सि, डि, इ र के पाइन्छ । यो प्रोटिनको पनि राम्रो स्रोत हो । यसका साथै क्याल्सियम, मिनरल्स, म्यानेसियम, आइरन, फस्फोरस, जिंक, कपर प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यसमा सोडियम कम र कालोस्टर पटक्कै हुँदैन । यो एन्टिअक्सिडेन्टको राम्रो स्रोत हो ।
– ओखर सेवन गरे मस्तिष्क तेज, चुस्त र स्मरण शक्ति बढ्दछ ।
– ओमेगा ३ फ्याटी एसिड मुटुलाई स्वस्थ्य राख्नका लागि सहयोग गर्दछ ।
– फोलेट वा फालिक एसिड यसले मस्तिष्कलाई स्वस्थ्य राख्दछ ।
– एक सय ग्राम ओखरमा १५ ग्राम प्रोटिन हुन्छ जसले मांशपेशी बढाउन सहयोग गर्छ ।
– ओखरमा न्युरो प्रोटेक्टिभ कम्पाउन्ड पाइन्छ जसले मस्तिष्कलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ ।
– बिहान र मध्यान्ह २ वटा ओखर चपाएर खाएमा कोलोस्ट्रोर नियन्त्रण हुन्छ ।
– नियमित ओखरको सेवनले हृदय रोग लाग्नबाट बचाउँछ ।
– तौल नियन्त्रणका लागि ओखर उपयुक्त हुन्छ ।
– ओखर खाँदा पेट लामो समयसम्म भरिन्छ । यसले गर्दा छिटै भोक लाग्ने हुँदैन ।
– नियमित २ वटा ओखर महसँग मिसाएर सेवन गरे मस्तिष्क स्वस्थ्य हुन्छ ।
– ओखरको सेवनले स्ट्रोकको हुनबाट बचाउँछ ।
– दैनिक बिहान बेलुकी मनतातो दुधसँग २ ओखर, एउटा बदाम सेवन गरे कमजोरी हट्छ ।
– महिनावरीको समस्यामा ओखर र मह मिसाएर मनतातो दुधसँग पिएमा लाभ मिल्दछ ।
– ओखरलाई हल्का भुटेर महसँग सेवन गर्नुपर्छ, खोकी ठिक हुन्छ ।
– मनतातो पानीसँग ओखर सेवन गर्दा जोर्नीको दुखाई ठीक हुन्छ ।
यो पनि – विहान नुहाउनु ठीक कि बेलुका ? नुहाउनु अघि जान्नैपर्ने कुरा !
डा. शेलीका अनुसार, नुहाउने बेला हाम्रो दिमागको सोँच र चिन्ता अचेतन मनमा गएर बस्दछ, जहाँ दिमागले स्वतः त्यस सोँचलाई केलाउन थाल्छ, यस्तो अवस्थालाई मनोवैज्ञानिक भाषामा ‘बेटा ब्रेन स्टेट’ भनिन्छ।
त्यति नै बेला हाम्रो दिमागको ‘अल्फा स्टेट’ मा शरीरलाई तना-व र थकानबाट आराम दिने काम गर्छ र क्षय भएका शरीरका कोषहरूलाई निको पार्ने काम गर्छ। जसले गर्दा दिनभरीको बोझलाई दिमागले सजिलैसित ह्याण्डल गर्न सक्दछ। “यहि कारण हो, विहान नुहाएपछि दिनभरी फ्रेस महशुस गरिने!”- शेली भन्छिन्।